Sakafo Bali. Sakafo any Bali " Journey-Assist - Ny tena matsiro indrindra any Bali
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Masaka Bali
Sakafo Bali. Inona no matsiro indrindra
Ny nosy Bali dia azo antsoina hoe paradisa ho an'ny tena gourmets. Ny sakafo ao Bali dia marika amin'ny karazan-javamaniry, voankazo, zava-manitra, tsaramaso, hena, trondro. Na dia any Indonezia aza i Bali, ny fahandro eto dia misy fahasamihafana amin'ny zavatra atao any amin'ny firenena hafa.
Mampiavaka ny sakafo mahazatra Balinese
Lovia malaza ao Bali
Kafe Luwak (Mine Luwak)
Ny trano fisakafoanana sy trano fisakafoanana any Bali
Torohevitra toro-hevitra momba ny gourmet
Mba hifankahalala amin'ny tena mofomamy Balinese dia tokony handeha any amin'ny nosy ianao. Ny zava-misy dia any amin'ny trano fisakafoanana hita ao amin'ny toerana fivarotana malaza amoron-tsiraka, ny miovaova dia miova tanteraka amin'ny fahazarana eoropeana.
Ny henatra mahery dia mampiavaka ny ankamaroan'ny vilia Bali, izay matetika mandroaka ny vahiny. Noho io antony io, any amin'ireo toeram-pisakafoanana izay natao ho an'ny mpizahatany, matetika no omanina ny lovia ho fanitsakitsahana ny fomba fahandro nentim-paharazana.
Rehefa nanafatra lozom-boasary, dia asaina hihinana azy amin'ny vary - mampihena be ny spiciness. Azonao atao koa ny mihinana sakafo misy episy misy voankazo, ohatra, ny akondro.
Ny fototry ny lovia
Ny foto-tsakafon'ny sakafo Bali dia vary, izay antsoina hoe "nasi" amin'ny fiteny eo an-toerana. Ny karazana vary malaza indrindra dia ny vary fotsy nasiana fotsyvary miloko mena nasiana menavary mavo nasi kuning (vary nahandro miaraka amin'ny zava-manitra).
Vary fotsy (Nasi putih) sy vary mena (Nasi mena)
Ny Bali dia tsy an'ny vegetarian mihitsy, noho izany, amin'ny lovia nasionaly dia matetika ianao no mahita henan'omby, henan-kisoa, akoho, trondro, makamba, hena, vokatra soja - tofu sy tempe. Samy hafa tanteraka ny fomba fandrahoan-tsakafo: andrahoina, endasina amin'ny menaka mangotraka, endasina amin'ny grill.
Faritany Rice any Bali
Ny zavatra tsy maintsy ilaina amin'ny sakafo Bali dia saosy sy zava-manitra. Masiaka tokoa ny ankamaroan'izy ireo, fa azo antoka fa ampiasaina hanomanana lovia maro. Misy zava-manitra 8 lehibe amin'ny sakafo Bali: dipoavatra mainty, dipoavatra fotsy, voa caraway, coriander, nutmeg, jirofo, voa kukui (ny voan'ny hazo labozia), sesame. Ny zava-manitra malaza hafa dia tongolo lay, tongolo, sakamalao, sakay, ary turmerika. Ny fampiasana siramamy palmie dia mahazatra.
Ny fototry ny fanomanana lovia Bali marobe ny pasta malaza indrindra avy amin'ny fifangaroana manitra, toa an'i Basa gede na Basa rajang, izay manome tsiro sy hanitra manokana ho an'ny lovia.
Ny tena lovia lehibe any Bali
Von-kisoa vita amin'ny ronono voatavo, alohan'ny hamandoana voatokana ary nasiana legioma, anana sy zava-manitra marobe. Ny mahandro tsirairay dia samy manana ny tsiambaratelony amin'ny fanomanana lovia tsy mahazatra toy izany, fa ny fananganana nentim-paharazana amin'ny famenoana dia heverina ho be dia be tongolo sy tongolo gasy, ginger, voasarimakirana, ravina ary sokay. Amin'ireo zava-manitra, tsaramaso dipoavatra, dipoavatra mainty, turmerika sy voankazo matetika dia ampiana matetika. Miomàna indrindra amin'ny fialantsasatra ara-pivavahana lehibe.
Ayam Goreng (Nasiana mofo) sy Bebek Goreng (Voahangy)
Ayam - akoho na akoho, Bebek - gana, goreng - nendasina. Ny lovia dia hena nendasina tamin'ny menaka, nandrahoina tao anaty ron-kena miaraka amin'ny zava-manitra manitra (tongolo lay, dipoà, sira, basilà, sakay, sns.). Tsy andrahoina amin'ny fahavononany tanteraka izy ireo, fa rehefa endasina kosa dia efa entina amin'ny "maina", ary tsy "endasina kely". Matetika dia aroso amin'ny vary nahandro, silaka kôkômbra vaovao, laisoa ary misy saosy masiaka foana.
Salady legioma mafana miaraka amin'ny saosy voanjo. Ny legioma dia misy legioma voatoto, mazàna ovy miaraka amin'ny laisoa, karaoty, kambana, tsaramaso maitso, ahitra ary legioma hafa. Ao amin'ny salady koa dia ahitanao ny vary nendasina ho an'ny Sate ayam amin'ny ravina akondro sy hanina. Ny salady dia arotsaka amin'ny atody maitso ary atody akoho amam-borona.
Ny Martabak dia mofomamy vita amin'ny lapoaly izay feno famenoana isan-karazany, sady mamy no masira. "Martabak manis" dia mofomamy mamy. Malalaka ny koba, mitovy amin'ny biscuit. Ny famenoana dia mety ho sôkôla, akondro, voanjo, fromazy ary zava-mamy hafa. Martabak telor dia mofomamy mofomamy miaraka amina henan'omby, akoho, atody, tongolo ary zava-manitra masira.
Azonao atao ny mividy Martabak amin'ny lovia kely mijanona eo amin'ny arabe. Toy ny fitsipika, ny tray rehetra (sarety misy kodiarana) dia natokana manokana ho an'i Martabak. Eo no masaka eo imasonao (fahitana mahagaga 🙂).
Trondro (mazàna tuna) miaraka amin'ny zava-manitra, fonosina ravina akondro, andrahoina amin'ny fandroana rano na arina arina. Ny arina dia tsy avy amin'ny hazo, toy ny fanaontsika, fa avy amin'ny akorandriaka maina. Ny fifangaroan'ny zava-manitra nentim-paharazana amin'ny fikosehana dia dipoavatra, sira, siramamy, voatabia ary tongolo lay. Asio dipoà sakay iray na roa ao anaty trondro koa. Ny sakay maintso dia manitra fa tsy manitra toy ny sakay mena. Ikan pepes - matsiro, milelaka ny rantsan-tananao.
Paty nendasina amina lapoaly wok manokana misy akoho, makamba, hazan-dranomasina, legioma, atody, saosy ary zava-manitra.
Ny trano fisakafoanana sy ny kafe dia afaka manolotra karazana paty 2 ho anao: bihun goreng - paty vera; kvetyau goreng - paty paty.
Ny vary dia afangaro amin'ny menaka legioma miaraka amin'ny legioma, homa na akoho, miaraka amin'ny zava-manitra sy anana. Ho fanampin ny lovia, mazàna tonga atody atody, anana ary sombin-kibo. Amin'ny serivisy fihinan-kanina, ny vidin'ny miendy nahandro na vary dia mety ho 1,5 hatramin'ny 5 US dolara isaky ny fanompoana.
Salady legioma mafana miaraka amin'ny saosy voanjo. Ny fandrafetana ny salady dia mazàna amam-bary ovy miaraka amina laisoa, epinara, kôkômbra, shallots, soja, atody, katsaka ary legioma hafa.
Martabak dia amidy amina dabilio kely mijanona eny an-dalambe. Raha ny fitsipika dia natokana ho an'i Martabak ity tray iray manontolo ity. Ao no masaka eo imasonao (fahitana mahavariana 🙂).
Ny tsindrin-tsakafo matsiro sy mahaliana indrindra any Bali
Tena malaza indrindra Pisang Goreng (Pisay atody)Akondro masaka ireny. Ny olona eo an-toerana dia antsoina koa hoe Godoh Gedang. Ny akondro dia mazàna ampiasaina amin'ny karazany Pisang Raja manokana, izay misy voasarimakirana. Potehina anaty tsatoka izy ireo, atsoboka ao anaty batter ary dipoavatra anaty menaka be dia be (voankazo lalina). Mivily ny felanao amin'ny felanao ianao fotsiny. 🙂
Martabak dia mofomamy puff izay toa pancake lehibe. Mety ho tsindrin-tsakafo na tsakitsaky. Saingy, noho ny firafesany be sy ny satiety, izy io koa dia mety ho ny làlana lehibe indrindra. Misy karazany 2 no fantatra - masira (Martabak telor) sy mamy (Martabak manis). Fomba famenoana pie mamy: sôkôla (Cokelat), akondro (Pisang), voanjo (Kacang), fromazy (Keju), sesame (Wijen). Ny famenoana pie amin'ny sira dia misy miaraka amin'ny hen'omby, akoho, atody, tongolobe ary zava-manitra.
Sweet Martabak Manis
Ny fivarotana amoron-dalana "Martabak" dia manomboka ny asany, amin'ny ankapobeny, amin'ny hariva. Ao anaty lovia toy izany dia ho masaka eo imasonao ny mofomamy (fahitana mahagaga 🙂). Safidio ny famenoana ary andramo rehefa mafana izy - tsara kokoa ny tsirony!
dia toa fritters kely. Ny koba ho azy ireo dia vita amin'ny lafarinina vary. Afangaro amin'ny voanio izy ireo ary nafafin'ny siramamy siramamy. Raha ny mahazatra dia fotsy ny pancakes toy izany, fa mety ho an'ny loko hafa, ohatra, ny maitso.
Zava-pisotro misy alikaola ao Bali
Misotroa alohan'ny alàlan'ny fametahana ranom-boankazo. Toa ny labiera ihany.
Misotroa Tuak (tuak). Bali
Tincture mamy .. ny divay vita amin'ny divay.
Brem (Brem) Divay Bali.
Vodka Bali any anaty rano. Fortress amin'ny 35 °.
Arak (Arak). Vodka Bali
Kafe any Bali
Ny dite any Bali dia tsy lanin'ny olona manokana, fa ny kafe any Bali dia mahazatra sy matsiro tokoa. Hita ihany koa ny dite, saingy tsy malaza io. (amin'ny fiteny eo an-toerana - "kopi") sy ny dite ("tech").
Ary amin'ny ankapobeny, ny mponina any an-toerana dia aleony mamono ny hetahetany amin'ny zavatra tsotra, toy ny voaniho na voankazo eo an-toerana.
Kafe lafo indrindra! Coffee Luwak - Kopi Luwak (Copi luwak)
Kopi Luwak dia karazana kafe manokana izay manana teknolojia fanodinana manokana. Izy io dia novokarina tamin'ny habetsahan'ny indostrialy any Indonezia ary koa any amin'ireo firenena toa an'i Filipina, India ary Vietnam. Io no karazana kafe lafo indrindra eto an-tany: ny vidin'ny 1 kg dia 700 $ eo ho eo.
Coffee Luwak - Copi luwak
Ny famokarana tsaramaso mety amin'ny fanaovana labiera ity dia tanterahina amin'ny alàlan'ny biby eo an-toerana - musang. Ireo biby ireo dia mihinana ny voankazo masaka amin'ny hazo kafe, ary avy eo ny pulp izay manarona ny tsaramaso dia levona ao amin'ny làlam-pandevonan'izy ireo. Avy eo ny musang dia mihanaka amin'ny voa. Ireo voa ireo avy eo dia angonin'ny olona, ​​nosasana sy maina amin'ny masoandro.
Ny tsiro manokana momba ny kafe Kopi Luwak dia hazavaina amin'ny alàlan'ny fahatsapana ny ranon-tsavony musanga mandoto proteinina maromaro izay mahatonga ny zava-pisotro mamarana. Ankoatr'izay, ny tsiro dia voakasik'izany fiantraikany amin'ny sombin-tsolin'ny mikroflora amin'ny fandevonan-kanina ny biby izany sy ny fanitsakitsahan'izy ireo ny glandika misy cibetin.
misy fambolena kafe maro any Bali, ary toerana maro asaina anaovana fanandramana kafe, ary ao amin'ny masonao ny biby sy ny dingana isan-karazany fanomanana ity kafe malaza ity.
Afaka mividy an'ity kafe ity ianao na aiza na aiza. Amin'ny fivarotana lehibe rehetra, azo antoka fa amidy. Azonao atao ny mividy azy any amin'ny magazay any amin'ny toeram-pambolena, nefa any dia lafo kokoa noho ny any amin'ny magazay.
Saingy manome soso-kevitra izahay fa tsy voafetra amin'ity karazana kafe ity ihany, satria ny kafe mora lafo amidy, matsiro!
Toeram-pisakafoanana sy Varunga any Bali
Bali dia manana trano fisakafoanana maro isan-karazany manomboka amin'ny varungs maro loko ka hatramin'ny trano fisakafoanana mihaja miaraka amin'ny sakafo eropeana.
Manoro hevitra anao tsy hoferana amin'ny hotely fisakafoanana ihany. Tokony handeha lavitra eny amin'ny arabe ianao. Any amin'ireo trano fisakafoanana ihany izay hita eny an-dalambe eny an-tanàna dia avo kokoa noho izany ny vidiny, ary ny sakafo dia manakaiky ny fomban-drazana eropeana. Raha mivadika ho amin'ny làlambe ianao dia afaka mahita trano fisakafoanana hafa - ady kely any Bali, izay mampihomehy ny vidiny, ary tsara ny sakafo ary mifanaraka amin'ny lovantsofina culinary tena any Bali.
Warung (Warung). Bali
Warung dia efitrano kely misy latabatra maromaro sy boaty fisehoana fitaratra mampiseho lovia eo an-toerana. Eto ianao dia afaka misakafo antoandro mahasoa amin'ny vola mitentina 2 dolara amerikana. Betsaka ny mpizahatany tonga amin'ireny orinasa ireny miaraka amin'ny fahafinaretana ... ary misy antony marim-pototra! 🙂
Taham-panakalozana any Bali amin'izao fotoana izao